Ejipta : Ny toe-karen’ny tsy mihinan-kena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2010 7:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, Nederlands, Italiano, عربي, বাংলা, Español, English
Niakatra izay tsy izy ny vidin’ny hen’omby tany Ejipta tao anatin’ny herinandro maromaro.. Mety hisy ifandraisany na tsia amin’ny toe-karena ankapobeny amin’izao fotoana izao izany saingy ny tsapa aloha dia mihavoasarika any amin’ny tsy fihinanan-kena intsony ny Ejiptiana noho ny halafosany. Nisy aza moa farany teo fanaingana hitokona tsy hihinan-kena nataon’ireo mponina mba hampihena ny vidiny.
Nampita ireo vaovao ireo tamin’ny alalan’ny blaoginy i Masr Al Youm tamin’ny 15 Aprily.
Nanoratra [Ar] mikasika io fiovaovan'ny vidin'ny hena tao anatin’ny taona vitsivitsy io moa i Weekite avy eo.
Nanoratra momba ny fanentanana tsy hividy hena [Ar] tao Ejipta koa ny Egypt Today tao anaty lahatsorany.
Toa ohatran’ny tonga tany am-poto-tsofin’ny mpiray vodirindrina amintsika tao Israely ny vaovao mikasika io fanentanana tsy hividy hena io; ka nanoratra momba ny tolotr'i Israely amin’ny fanampiana antsika hamaha ny olana ilay ejiptianina iray mpitoraka blaogy ao amin'ny Cairo Life Reviews .